ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? – Kavrepati
Home / आर्थिक / ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
admin October 27, 2021	आर्थिक Leaveacomment 193 Views
काठमाडौं – बुधबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । मंगलबार तोलामा २ सय रुपैयाले बढेको सुनको मूल्य आज तोलामा ६ सय रुपैयाले घटेको हो । मंगलबार प्रतितोला ९२ हजार ६ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर तोलाको ९२ हजार रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
अन्य समाचार : गाउँ फर्क अभियान शुरु, फर्किनेलाई यति धेरै रकम हाताहाती अनुदान ! तनहुँ – जिल्लाको ऋषिङ गाउँपालिका कार्यालयले गाउँ फर्क अभियानअन्तर्गत रु एक लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
जग्गाविहीन नागरिकलाई गाउँमा फर्किनका लागि आकर्षण गर्ने उद्देश्यले आवास निर्माणका लागि उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । ऋषिङ फर्क अभियानअन्तर्गत जग्गाविहीन स्थानीयवासीलाई आवास निर्माणका लागि उक्त रकम अनुदान दिन सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वडाध्यक्षको रहर लाग्दो व्यवसाय भानुभक्त पोख्रेल तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ । जनप्रतिनिधि भए पनि उहाँको स्वभाव भिन्न प्रकारकोे छ । जनप्रतिनिधि हाकिमको स्वभावले नभइ जनता, किसान र मजदूर भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच उहाँको छ ।
पोखरी निर्माणको लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट दुई पोखरीको लागि रु पचास हजार र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट माछाका भुरा निःशुल्क उपलव्ध गराएको हो ।
सुरुमा करिब दुई लाख लगानी गर्नुभएका पोख्रेल दम्पत्तीले दुई लाखको माछा बिक्री हुने विश्वास गरेका छन् । धान, मकै र तरकारीखेती भन्दा माछापालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको जनाइएको छ । विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा बालकुमार श्रेष्ठ, प्राविधिक रुद्र ठकुरी र गाउँपालिकाका पशु शाखाका प्रमुख मधुविलास न्यौपानेको निरन्तर प्राविधिक सहयोग लिएर वडामा नमूना माछा फार्म बनाउन प्राथमिकता दिइएको छ ।
Next स्वाँस्वाँ गर्दै एक्कासी बारको बैठक हलभित्र छिरेका ऋषि धमलालाई जब बाहिर निकालियो (भिडियोसहित)